ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာခရောင့်များ | တိုယိုတာခရောင့်ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
A/C: Front (108)
Lks 1,450 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Crown Athlete G 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် GRS214-6000095) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျ...
Black Toyota Crown Majesta 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Pearl White Toyota Crown 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Pearl White Toyota Crown 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Pearl White Toyota Crown Majesta 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးက...
Black Toyota Crown Athlete 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Pearl White Toyota Crown 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ...
Pearl White Toyota Crown Royal Saloon 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Pearl White Toyota Crown Royal Saloon 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Pearl white Toyota Crown Royal Saloon 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl White Toyota Crown 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Black Toyota Crown 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl white Toyota Crown Royal Saloon 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....
Silver Toyota Crown 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl White Toyota Crown Athlete 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးက...
Pearl White Toyota Crown 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
ပြည်တွင်း ဆလွန်ကားတွေထဲက ရေပန်းစားတဲ့ ခရာင့်များ
တိုယိုတာတံဆိပ်ထဲမှ ဇိမ်ခံ ပရီမီယံ လိုင်းမှာရှိတဲ့ တိုယိုတာ ခရောင့်များကို ပြည်တွင်းမှာ အတွေ့ရများပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ် ကားဆိုလျှင် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရနိင်ပြီး စီးရတာလည်း ပြည့်စုံမူတွေနဲ့ တည်ရှိတဲ့အတွက် ခရောင့်ကို လူကြိုက်များပါတယ်။ လူလတ်တန်းစား အချို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမူ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဌင်းတို့အနေနဲ့ ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ဂျပန်လေလံ ဆိုဒ်တွေကနေ မှာယူကြပါတယ်။ ပြည်တွင်း ကားအရောင်း ဈေးတန်း တစ်ခုအနေနဲ့လည်း တည်ရှိနေပြီး ပြည်တွင်း ကျော်ကြားကားများထဲမှာ ပါရှိပါတယ်။ ခရောင့်ကားတွေထဲမှာ ခရောင့် အတ်သလပ်ကားတွေကိုလည်း တွေ့နိင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဌင်းတို့ကတော့ ခရောင့် ရိုးရိုးလို တော်ဝင်မဆန်ပဲ ကားက ဆလွန် စပေါ့စ် ပုံစံ ပေါက်နေတဲ့အတွက် ဌင်းကား အမျိုးအစားကိုတော့ ပြည်တွင်းမှာ လူကြိုက်နည်းပါတယ်။ ပြည်တွင်းလမ်းတွေရှိ ခရောင့်ကားတွေကို အများအား ပုလဲရောင် ဖောက်ထားတဲ့ ပါးဝိုက်နဲ့ အဖြူစပ်အရောင်တို့မှာ တွေ့နိင်ပြီး အမည်းရောင်း ရိုင်းရယ် ခရောင့်တွေကိုလည်း ၀င့်ကြွားစွာ တွေ့နိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
ကားမော်ဒယ်များ နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်
ရိုင်းရယ် ခရောင့်၊ မတ်ဂျစ်စတာ ခရောင့်၊ အတ်သလပ် ခရောင့်တို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ကားထုတ်လုပ်တဲ့ ကာလ အပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်ပြီး မော်ဒယ် ၃ မျိုးလောက်ကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရောင့်ရဲ့ ၁၂ ခုမြောက် မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ၁၉၉၉ ကနေ ၂၀၀၃ ထိကို ထုတ်တဲ့ S170 ၊ ၁၃ ခုမြောက် မျိုးဆက် ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၃ ကနေ ၂၀၀၈ ထိ ထုတ်တဲ့ S 180 ၊ မျိုးဆက် ၁၄ ခုမြောက် ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈ ကနေ ၂၀၁၂ ထိထုတ်တဲ့ မော်ဒယ် S 200 တို့ကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ S 200 ခရောင့်တွေဟာ မော်ဒယ် ပြောင်းပြီး ကား ရုပ်တွေလည်းပြောင်းသွားကာ ဆီဒန်ပုံစံ ခေတ်ဆန်လာပြီး ဈေးနှုန်းလည်း ကြီးမြင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်တွေကတော့ ၂၅၀၀ စီစီမှ ဆလင်ဒါ ၈ လုံးသုံးတဲ့ ၄၆၀၀ စီစီ အင်ဂျင်တွေထိ ဖြစ်ပြီး အော်တို ဂီယာတွေနဲ့သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ပြည်တွင်းမှာ ခရောင့်ကားတွေကို အင်ဂျင် ၂၅၀၀ စီစီနဲ့ ၃၀၀၀ စီစီတို့ မှာ အများအားဖြင့် အသုံးပြုနေကြပြီး အော်တို ဂီယာတွေကို သုံးကြပါတယ်။ မော်ဒယ်အနိမ့်တွေ ဖြစ်တဲ့ ၁၉၉၉ ကနေ ၂၀၀၃ ထိကို ထုတ်တဲ့ S170 တွေမှာ အင်ဂျင်ကို ၂၀၀၀ စီစီကနေ ၃၀၀၀ စီစီထိကိုတွေ့ရပြီး နောက်ပိုင်းကားတွေမှာတော့ ၂၅၀၀ စီစီကနေ ၄၆၀၀ စီစီထိ အင်ဂျင်နဲ့ ဌင်းရဲ့ ကြားထဲမှာ ထုတ်ပါတယ်။ ခရောင့်တွေထက် ပိုပြီး ကားကိုယ်ထည်ရှိတဲ့ မတ်ဂျစ်စတီ ခရောင့်တွေမှာတော့ အင်ဂျင် အနည်းဆုံး ၃၀၀၀ စီစီမှာလာပြီး ၄၀၀၀ စီစီလောက်ထိကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ မတ်ဂျစ်စတီတွေမှာတော့ အင်ဂျင် ၃၅၀၀ စီစီတွေမှာ လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လေးဘီးမောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီတွေမှာမှ ဟိုက်ဘရစ်တွေလည်း တွဲဖက်ပါဝင်လာပါတယ်။ ခုနှစ်အားဖြင့် ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ထုတ် မတ်ဂျစ်စတာ ခရောင့်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုယိုတာ ခရောင့်ကို အမျိုးအစား (၅) မျိုးပေါ်မှာ မှုတည်ပြီး တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုး ခရာင့် ဆီဒန်ကား အပြင် ကွန်ဖော့၊ ရွိုင်းရယ်နဲ့ အဲသလစ် နဲ့ မတ်ဂျစ်စတာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရောင်း ဟိုက်ဘရစ်ကိုလည်း တီထွင်မှု တစ်ခုအနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံသဏ္ဍာန်တွေက အမျိုးအစားပေါ်မှုတည်ပြီး ကွဲပြားပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ မော်ဒယ် တစ်ခုအတွင်းမှာပဲ မှုတည်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရောင့်တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းများနဲ့ ရရှိနိုင်မှု
ပြည်တွင်းမှာတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၅ ၊ ၂၀၀၆ ခရောင့်တွေကို ပိုပြီး လူကြိုက်များပြီး စီးကြတဲ့အတွက် ခရောင့် တစ်စီးက အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ကနေ ၂၅၀ သိန်းအထိ ပျဉ်းမျှအားဖြင့် ဈေးရှိပြီး ဒီထက် မော်ဒယ်အအောက်တွေဆိုရင်တော့ ကျပ် သိန်း ၁၃၀ နဲ့ ၁၄၀ လောက်မှာ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဌင်းတို့ဟာ မော်ဒယ်တွေ အနေနဲ့ သိပ်ဟောင်းသွားပါပြီ။ ၂၀၁၂ ခရောင့် နောက်ဆုံးပေါ်တွေဆိုရင်တော့ ကျပ်သိန်း ၈၉၀ သိန်း လောက် ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆလွန် ဓာတ်ဆီကားတွေ ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်က ၂၅၀၀ စီစီကနေ ထုတ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ စတိုင်ရှိပြီး အီလစ်ထရွန်နစ်နဲ့ တီထွင်မှုတွေကို မော်ဒယ်သစ်တွေမှာ ထည့်သွင်း ပေါင်းထည့်ထားတဲ့ ကားအမျိုးအစားများ ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်ဟောင်းကားများဟာ မော်ဒယ်သစ် တိုယိုတာ ခရောင့်တို့ထက်ပိုပြီး ဆီစားပိုနိုင်ပါတယ်။
တိုယိုတာ ခရောင့်တွေဟာ အိမ်စီးကားတွေ အဖြစ် တင့်တယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်သလို ဆီစားကလည်း နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်တွေမှာ သင့်လျော်လာပါတယ်။ ခရောင့်ထဲမှာမှ အမျိုးအစားကွဲများကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် စီးနင်းနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ခရောင့် အဲသလစ် ၂၀၁၄ တွေဟာ နောက်ပိုင်း စပေါ့စ်ဗားရှင်းတွေ ဖြစ်လာပြီး တိုယိုတာ လပ်ဆပ်ကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းသွားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။